ZCTU Yotambira Mutongo waJustice Malaba Ichiti Wakanakira Vashandi
Sangano rinomirira vashandi, reZimbabwe Congress of Trade Unions, rinoti ratambira nemufaro mutongo wapihwa nedare reConstitutional Court wekuti vashandi vakadzingwa basa mushure mekudzingwa basa vapihwa chiziviso chemwedzi mitatu vanofanira kubhadharwa mari dzavo pamakore ose avakashanda kana kuti retrenchement pachirungu.
Dare iri rapa mutongo uyu zvichitevera nyaya yakakwidza kudare iri nekambani yeGreatermans iyo yaida kuti chikamu chemutemo weLabour Amendment Act chinoti vashandi vabhadharwe mari dzavo chinzi chinopokana nebumbiro remutemo.
Chikamu chemutemo uyu chakadzikwa neparamende ichida kumisa kudzingwa kwainge kwave kuitwa zviuru zvevashandi, zvichitevera mutongo wakaitwa nedare reHigh Court muna 2016 uyo wakapa kambani yeZUVA Petroleum mvumo yekudzinga vashandi nekuvapa mari yemwedzi mitatu chete zvisinei nekuti vashanda mwedzi mingani.
Zvichitevera mutongo uyu makambani akawanda kunyange aive nemari akatanga kudzinga vashandi izvo zvakazoiiita kuti hurumende ipindire ichIvandudza mutemo weLabour Act nechinangwa chekuti kuti vashandi vese vainge vadzingwa basa zvichitevera mutongo weZUVA Petroleum vapihwe mari dzavo dzeRetrenchment.
Hurumende yakati mutemo uyu, Labour Amendment Act 2015, waifanira kutanga kushanda mugore ra2015 izvo zvaireva kuti vese vakamiswa basa mutongo weZUVA Petroleum usati waturwa vafanira kupihwa mari dzavo.
Greaterman yakakwikwidza nyaya iyi ichiti nyaya yekuti mutemo wavaudzwa utange kushanda kumakore ekumashure yaityora bumbiro remutemo.
Asi mutongo mukuru wematare edzimhosva, Justice Luke Malaba, vati mutemo uyu unogona kutanga kushanda kubva kumakore ekumashure.
Sachigaro veZCTU, VaPeter Mutasa, vaudza Studio7 kuti vafara chose nenyaya yekuti dare rakadzirisa nyaya yakange yakakanganisika pakati pevashandi nevashandirwi.
Vatiwo makambani akawanda ange aenda kumatare asingade kubhadhara vashandi uye dare rajekesa nyaya iyi pachena.
Vati kunyange hazvo vashandi vanzi varipwe, mari dzavanonzi vapihwe ishoma uye vange vachida kuti mushandi mumwe nemumwe apihwe mari yemwedzi miviri kana mitatu pagore rega rega raakashanda.
Mukuru wesangano rinomirira vashandirwi reEmployers Conferderation of Zimbabwe, VaJohn Mufakari, vaudza Studio7 kuti havana zvakawanda zvavangataura sezvo vasati vawona mutongo wapihwa nedare uyu.
Vashandi vanodarika zviuru makumi maviri nezvishanu vakadzingwa basa zvichitevera mutongo weZUVA Petroleum uye makambani akatozomira kudzinga vanhu mabasa mushure mekunge hurumende yapindira.